Ọbara Blogger na-agba Ọsọ ka SEO agbasa ozi agbasa ozi | Martech Zone
Ezitere site na Christina Warren:
Nye anyị, ụdị ọgụ SEO kpughere n'izu a bụ nanị ụzọ ole na ole site na ihe ọtụtụ ndị na-ede blọgụ / weebụsaịtị na-eme kwa ụbọchị: kpachaara anya gbalịa igwu egwuregwu ọchụchọ naanị ka ha wee nwee ike ịnweta ọtụtụ saịtị ha, yana na ndọtị, ma eleghị anya -eme ego ole na ole. Ọ gwụla ma ị na-agba ọsọ na-agbatị-ma ọ bụ na-enwe obi ụtọ, ọfụma - usoro nyocha kachasị elu n'ụwa agaghị enwe uru na-adịgide adịgide ma ọ bụrụ na ọdịnaya adịghị.
Otu nkịta iwe
Ozi zuru oke nwetara nzaghachi siri ike n'aka Michael na Graywolf's SEO Blog, onye na-ekwu n'ụzọ nkịtị Christina bụ onye iberibe na-enweghị isi. Kinddị asụsụ ahụ siri ike, agaghị m ebuso Christina agha n'onwe ya, mana m ga-ekwupụta na ọkwa ya bụ ọgụ onwe onye megide ndị dị ka m - ndị na-arụ ọrụ blọọgụ anyị nwere oke agụụ na nka na ụzụ iji dọta ma debe ọtụtụ ndị na-agụ ya.
Ghọta teknụzụ injinị nchọta na ịkwalite saịtị gị adịghị ka nyocha okporo ụzọ na ịchọta ebe kachasị mma maka ụlọ ahịa nkuku gị. Nwere ezigbo ngwaahịa na nnukwu ụlọ ahịa, ọ bụ na ọ nweghị ọgụgụ isi itinye ụlọ ahịa na ebe kachasị mma? Ọ bụ Ịgba Cha Cha belụsọ ma ị tinyere ụlọ ahịa gị n’etiti ọzara ebe mmadụ na-enweghị ike ịchọta ya?
Christina pụtakwara na ọ maghị ikike Google nwere iji nyochaa ma debe njikọ ya n'ụzọ ziri ezi. Gwa eziokwu, ị nwere ike ịme egwuregwu niile ịchọrọ, mana ọ bụrụ na ọ nweghị onye na-edegharị saịtị gị, ị gaghị anọ n'ọkwá ahụ ogologo oge. Ewu ewu bụ isi ihe na weebụ, ndị na-ede blọgụ na-enyekwa aka mee ka ibe ha bụrụ ndị ama ama. M na Google na-eme ọtụtụ narị ọchụchọ kwa ụbọchị, ọ na-esiri m ike ịchọta peeji nke dị elu nke na-enweghị ozi m na-achọ.
Na-ede blọgụ Ohere? Kpamkpam!
Y’oburu n’achoghi iji ohere ihe ndia meghariri, I bu onye nzuzu. Adịghị m Ịgba Cha Cha sistemụ ahụ site na itinye uche na peeji m, ọdịnaya, nhọrọ isiokwu, wdg. Ana m etinye kapeeti uhie maka Google, Microsoft, na Yahoo! ịchọta m ngwa ngwa ma hazie ọdịnaya m nke ọma.
Google dere nhazi nke ezigbo saịtị niile kwesịrị ịgbaso. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịgbaso usoro esi eme, emela mkpesa maka m na nri abalị gị na-atọ ụtọ dị ka nke nzuzu ma e jiri ya tụnyere nke m. Bilie esi nri, soro ntuziaka ndị ahụ… ma jụọ maka enyemaka mgbe ịchọrọ ya!
Tags: omume kacha mmaemail nkwalitendepụta emailemail mmezi ndepụtafliptopakụkọ mgbasa oziTụọ CPSliderọgụgụ isi mmadụusoro mgbasa ozi kacha mmandụmọdụ gbasara mmadụ
Dee 1, 2007 na 12: 44 AM
Doug: Okwu ya dị ka nke a, abịaghachiri m na saịtị gị. Amamihe ma doo anya. Are zuru oke na ihe atụ ahụ na ụlọ ahịa dị n'ọzara.
Ire ahia dị ezigbo mkpa mgbe nnukwu ụlọ ọrụ na-agbasa oke na ozi yana ọ dị mkpa ịgakwuru onye ahịa gị. Ọ bụghị na niile na-eri ezie ụzọ dị ka spam m na-eleda kpamkpam…
Site na blọọgụ ndị nta ahụ nwetara ụzọ ọhụrụ iji gwa eziokwu ha na ndị na-ewepụ ike ha na-ewe iwe. Echere m na ọ bụ naanị ihe mgbaàmà na ha na-eche eziokwu ndị ọzọ karịa nke ha bụ ihe na-ezighi ezi…
Ha ga-enwe ihe siri ike edemede…
Dee 1, 2007 na 9: 14 AM
Daalụ maka okwu ọma gị, Bengt! Ntanetị abụwo n'ezie ezigbo nhazi.
Dec 1, 2007 na 2:38 PM
Ọ na-ada m ka à ga-asị na ihe Christina kwuru banyere “igwu egwuregwu” na-ezo aka karị n’onye na-eji ụzọ okpu. Ntọala njikarịcha nke blog / saịtị bụ ihe niile marketers nwere mara ma ọ bụ na ha ejedebe na-ahapụ ”egwuregwu” na ndabara… Ekwenyere m na ọ dịghị ihe ọzọ na-adabere na na ziri ezi banyere inwe ọdịnaya ma ọ bụ ọzọ.
N'ihe banyere ikike Google nwere ịkọwapụta peeji nke ziri ezi… ha zuru oke, mana emeela m ọchụchọ ebe ndepụta kachasị enweghị isi na nchọta belụsọ maka isiokwu (s) na-egosi na ederede oge ụfọdụ.
Ọ bụ ezie na m ghọtara nke ọma ihe niile ị na-ekwu Doug, naanị m chọrọ ịbụ onye ziri ezi na Christina - echeghị m na ọ bụ mkpokọta onye iberibe.
Dec 1, 2007 na 3:12 PM
Ikekwe nke ahụ bụ nsogbu, William. Christina anaghị amata ọdịiche dị na nke ọ bụla, ọ na-akụkọta ebe niile na-ekwu na anyị bụ nsogbu, ọ bụghị azịza ya.
Nke a bụ mmetọ ọzọ:
Enwere ọtụtụ okwu n'ime mpaghara teknụzụ, ọkachasị blogosphere banyere iji SEO yana otu esi adị ỌMA maka ndị na-ede blọgụ ma ọ naghị emetụta ndị na-agụ / ndị na-enyocha / ndị ọrụ oge niile. Nke a bụ ụgha.
SEO adịghị mma maka ndị na - agụ ya na ndị na - achọ ya? N'ezie? Ihe niile bụ ụgha na blọọgụ na-emetụta nsonaazụ ọchụchọ na-adịghị mma. Enwetara m ọtụtụ enyemaka m site na blọọgụ, ọ bụghị saịtị broshuọ… enyemaka na ịchọta ndị na-ere ahịa, mmepe, SEO, ahịa, teknụzụ… adịkarịghị m achọta ihe ka mma na mpụga blogosphere.
Ekwenyere m na blọọgụ na-emepe emepe, na-akwụwa aka ọtọ ma na-edozi karịa weebụsaịtị. Ọ bụ ya mere ndị mmadụ ji etinye uche ha nke ukwuu - na nke ọzọ - Google na-ebuli ha elu. Ndị ọrụ anaghị amasị nke a… n'eziokwu, ha na-eleda ya anya n'ihi na ọ nwere ike ịmanye ha ịmeghe ma bido ịde blọgụ ha.
Media na-eche otu ihe, na-akụ blọgụ ma na-ata ụta ahụhụ ha niile dị n'ịntanetị na ndị na-ede blọgụ. (Dị nnọọ ka ha na-ata ụta ọkwa ndị a na-anwụ na eBay na Craigslist). Ma ọ dịkarịa ala, Mass Media nwere amamihe, ọ bụ ezie na ha na-ede blọgụ ugbu a!
Ihe niile gbasara ntinye na mkpa. Echere m na Christina nwere ihe ọjọọ niile n'ihi na ndị mmadụ na-achọ ụdị ọdịnaya a. Ndị na-ede blọgụ abụghị nsogbu. Amaghi bu.
PS: Echeghị m na Christina bụ 'onye nzuzu', ma. Echere m na ọ maghị ọdịdị ọchụchọ, omume ịntanetị, na otu esi etinye ya n'ọrụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Amaara m ọtụtụ ndị folks dị ka Christina!
Dec 3, 2007 na 9:02 PM
Dịka ọ dị n'ihe niile, enwere ezi akara n'etiti ezi ihe na ihe na-adịchaghị mma (njọ). Echere m na ọ dịịrị onye ọ bụla n'onwe ya ime nke ahụ, mana n'ihe banyere blogosphere ọ na-esiri ụbọchị ndị a ike inweta ihe na-eme na-enweghị opekata mpe itinye usoro ọhụụ dị elu. Ọ bụrụ na ị gụọ blog nke Matt na nke a, ị ga-ahụ nkwupụta dịka “ịkwesighi ime nke a ma ọ bụ nke ahụ mana ọ bụrụ na ị bụ then” - lol 🙂
Dec 4, 2007 na 2:10 PM
Nke a dịtụ ka “egwuregwu” na anyị niile nwere idozi egwu “ịchụkwudo” na usoro kachasị ọhụrụ… mana nke a bụ ikpe na ọ bụla azụmahịa.